Wasiirka Caafimaadka Puntland oo xilka la wareegay | Waayaha
You are here: Home 2014 February Wasiirka Caafimaadka Puntland oo xilka la wareegay
Munaasabad uu xilka kula wareegayo wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr.Saadiq Eenow ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka wasaaradda caafimaadka.
Munaasibada waxaa kasoo qayb galay shaqaalaha wasaradda caafimaadka,hay’addaha bahwadaagta ay ka yihiin dhanka shaqadda iyo madaxdii hore ee wasaaradda maamuli jirtay.
Ugu horayntii goobta waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka wasaradda mudadii uu xafiiska joogay wasiirkii hore ee caafimaadka Dr.Cali Cabdilaahi Warsame,waxana ka muuqday waxbqad tiro badan oo lagu tilaamsaday,taasoo ay ka mid yihiin dhanka dhismaha goobo.
Wasiirkii hore ee wasaaradda Caafimaadka Dr.Cali Cabdilaahi Warsame ayaa sheegay inuu ku farax san yahay sida wanaagsan ee loosoo agaasimay xaflada xil wareejinta,wuxuna sheegay mudada uu xafiiska joogay inuu wax badan dhanka caafimaadka ka qabtay.
Madaxda cusub ee xilka la wareegtay ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo kasoo bixi kara howsha loo igmaday,wuxuna sheegay inay muhiim tahay sidii caafimaadka Puntland loo hagaajin lahaa.
Wasiirka cusub ee wasaaradda Caafimaadka Dr.Saadiq Eenow oo khudbad muhiim ah soo jeediyay ayaa sheegay inay ka go’an tahay sidii loosii hormarin lahaa caafimaadka Puntland,wuxuna madaxdii ka horaysay ku ammaanay sida geesinimada leh ee ay dadkooda ugu addeegeen.
Sidoo kale waxaa munaasibada ka hadlay masuuliyiin ka socday hay’addaha wasaaradda caafimaadka la shaqeeya sida UNICEF,WHO waxayna soo dhaweeyeen madaxda cusub ee wasaaradda loosoo magacaabay.
Waa markii ugu horaysay uu Saadiq Eenow xil wasiir qabto,wuxuna inta badan ku caan baxay ka taariikhda iyo in dadka lagu toosiyo wadada toosan.